Họtelu oka ibe na Zanzibar di na Jumia Travel - Onu ahia na ihe Nyocha
Họtelu ndi di na Zanzibar
Maka ọnụnọ gị na Zanzibar, ọ dị mkpa na I ga ahọrọ họtelu di gị nma. Ma ọ bụ ulo ebe ntụrụndụ nke eji kpakpando ise mara udi ya maka ebe a na eme ihe ihunanya ma ọ bụ ulo ebe odo osimiri nke ndi Tanzania di ọnụ ala maka ndi njem mmefu ego, ị ga achota otu n’ime ha na Jovago.E nwere ọtụtụ họtelu ndi di nma na Zanzibar, ndị bụ isi sepu nti n’ime ha bu ndị a, Zanzibar Serena Họtelu, Arabian Nights na Dream of Zanzibar . E nwere họtelu ndị ọzọ ọnụ ego ya di ala na Zanzibar, ndi nke dị ka Mla Ndege Lodge Matemwe Baharini Villa na ndị ọzọ. Travel.jumia.com na enye mwepu na onu ego ahia di nma maka họtelu ndị a.
Tinye akwụkwọ maka onu ụlọ gị họtelu taa ma na-enweta azumahia họtelu kasị mma na mwepu onu ego ahia na Zanzibar site na Jumia Travel. Nuria onu maka I nwere onwe gi ịkwụ ugbu a ma ọ bụ mgbe emesịrị na ụlọ onuno ndi kasị di na Tanzania. Kwụọ-ụgwọ kpọmkwem na họtelu mgbe I na apụ. Tinye akwukwo ugbu a, ma kwụọụgwọ mgbe emesiri na ufodu họtelu.
Akwukwo aha ndepụta nke họtelu ndi di na Zanzibar
Chọpụta akwukwo aha ndepụta anyị zuru oke maka họtelu ndi di na Zanzibar. Nke a bụ aha ndepụta nke họtelu ndi di na Agwaetiti nke Zanzibar (Zanzibar Islands). Aha ndepụta a gụnyere họtelu ndi di ukwu di oke onu ahia, ụlọ ahia ya bu nke a na akpo skyscraper na okwu beeke bu ulo elu oka ibe, na họtelu ndi ochie di na akiko, nakwa họtelu ndi nke dị kwa ọnụ ala. Tụlee onu ahịa, nweta mwepu na onu ahia anyi, gụọ akwukwo ihe nkowa nke onye ọbịa ma hụta kwa foto nke họtelu na ụlọ ebe ezumike ndi di na Zanzibar.
Họtelu Zanzibar North Coast Họtelu Zanzibar West Coast Họtelu Zanzibar East Coast Họtelu Zanzibar South Coast Họtelu Pemba Họtelu Mafia Island
Họtelu Stone Town Họtelu Nungwi Họtelu Paje Họtelu Kiwengwa Họtelu Matemwe Họtelu Bwejuu